Madaxwaynaha Slovakiya oo magacaabay Ra’iisul wasaare cusub | Star FM
Home Caalamka Madaxwaynaha Slovakiya oo magacaabay Ra’iisul wasaare cusub
Madaxwaynaha Slovakiya oo magacaabay Ra’iisul wasaare cusub
Madaxwaynaha wadanka Slovakiya Zuzana Caputova ayaa Eduard Heger, u magacaabay in uu noqdo ra’iisul wasaraha cusub ee dalkaasi.
Tani ayaa timd kadib muddo bil ah oo wadankaas ay ka tagnayd fadeexad lala xiriiriyay isbahaysiga haya talada dalkaasi taasoo ka dhex dhalisay khilaaf wayn.
Fadeexadda ayaa soo baxday markii ra’iisul warihi hore ee Slovakiya uu si lama filaan ah u soo ibsaday tallaaka cudurka covid-19 ee lagu soo farsameeyay dalkaasi Russia.
Gudoomiyaha xisbiga Ordinary People Igor Matovic oo soo hayay xilka Raisul wasaaraha Sloakiya laga soo bilaabo 21 bishi march ee sanadki hore ayaa hatan lawareegaya xilaka wasiirka maliyada oo horay uu u hayay raisul wasaraha cusub ee ee isaga badalaya.
Arinkani ayaa loga gol leeyahay in lagu soo afjarao fadeexda ka dhex’qaraxday isbahaysiga hogaamiya wadankaasi Slovakiya.
Previous articleQaramadda midoobey oo laga dalbaday inay talaabo ka qaado ciidamada wadanka Myanmar
Next articleTaliyihii saldhigga booliska ee waqooyiga Keiyo oo geeriyooday